Wararka Dibadda – Page 9 – Shabakadda Amiirnuur
Kenya oo Ku Fashilantay Sii Wadida Darbigii Ay Ka Dhiseysay Xuduud Beenaadka Ay La Leedahay Soomaaliya.
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in Baarlamaanka wadankaas ay hakad galiyeen dhismihii ay Xukuumaddooda ka wadan Xuduud Beenaadka ay la wadaagaan qeybo kamid ah gobolka Gedo iyo Jubada Hoose. Baarlamaanka ayaa xukuumadda ka dalbaday in baaritaan lagu sameeya mashruuca dhismaha oo ay ku tilmaameen mid shaki badan […]
Wasiirka Gaashaandhigga Itoobiya oo Eedeyn Kulul U Jeediyay Ra’iisulwasaare Abey.
Wasiirka Difaaca Itoobiya ninka lagu magacaabo Lima Migersa, oo ah saaxiibka ugu weyn ee Ra’iisul wasaare Abey Axmed, ayaa jimcihii dhaleeceeyay qorshaha uu ugu beddelayo Isbahaysigii EPRDF ee Itoobiya maamulayay hal xisbi oo qura, taasi oo muujineysa kala qeybsanaan muuqata ka hor doorashada qorsheysan in la qabto sanadka danbe ee […]
Wargeys ka soo baxa Ingiriiska ayaa daabacay warbixin muujineysa sida hooyooyinka Kenya ay carruurtooda ugu dilaan Coca-Cola si ay nolosha u dhaafiyaan, sida lagu sheegay warbixin xuquuqda Aadanaha ah. Hooyooyinkani waxay ku quudiyaan dhallaanka Coca-Cola ama biirka caleenta ah iyo cabitaanno kale oo jilicsan halkii ay caano siin lahaayeen, sababtoo […]
Shir ay wadanka Ingiriiska ku yeesheen qolyaha isku magacaabay Ururka Caalamiga ah ee Badaha ayaa lagu doortay Golaha maamulaya Ururkaas. Ururkan oo ay xubno ka yihiin dhamaan dalalka leh Xeebaha iyo kuwa ku dhow ayaa waxaa doorashadiisa lagu qabtay Magaalada London ee caasimadda wadanka Ingiriiska, iyadoo Kenya loo doortay Hogaamiyaha […]
Tanzaniya oo Sheegtay In Mashruuceeda Gaaska Uu Wajahayo Dib U Dhac Dheeri Ah.
Tansaaniya ayaa joojisay wada-hadalkii u dhexeeyey iyada iyo maal-gashadeyaasha waaxda saliida iyo gaaska kaas oo u gogol xaari lahaa dib-u-eegista heshiisyada Wax-Soosaar Wadaag (PSAs). Kadib markii ay daahiyeen hawlihii loo igmaday. Sannadkii 2018, dawladdu waxay amartay in dib loo eego shuruucda iyo siyaasada, iyada oo hakad la geliyay qaybta mashruuca […]
Saworr: Kaligi Duule Weerar Hubeysan Ka Geystay London.
Wararka ka imaanaya wadanka Ingiriiska ayaa ku waramaya in weerar keligii duulnimo ah uu k dhacay magaalada London ee caasimadda wadankaas, kaas oo uu fuliyay qof muslim ah. Weerarka waxaa lagu dilay ugu yaraan 2 ruux, halka sidoo kale lagu dhaawacay 3 kale, waxaana ugu dambeyntii Police-ku ay toogteen qofkii […]
Cod Sir ah: Farmaajo oo sheegay in Umal ay u adeegsanayaan la dagaallanka Xarakada Al Shabaab.
Dowladda Federaalka ayaa markii ugu horraysay caddaysay ujeedkii laga lahaa in Sheekh Max’med Umal uu muxaadaro ku qabto magaalada Muqdisho balse dibad baxyo ay dhigeen kooxaha Suufida ay sababtay in Muxaadaradaas la joojiyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa hoggaamiyaal katirsan Kooxaha Suufida u sheegay in socdaalka Sheekh Umal ee magaalada Muqdisho uu […]
Mid kamid ah culimada Muslimiinta ayaa ku geeriyooday xabsiyada maamulka Aala-Sucuud.
Wararka ka imaanaya dhulka Xarameynka ayaa ku waramaya inuu geeriyooday mid kamid ah culimada diinta Islaamka, kaas oo ku xirnaa xabsiyada maamulkaas. Sheekh Fahad Al-Qaadi oo kamid ahaa culimada ka hor yimid fisqiga iyo fasahaadka laga wado dhulka Xarameynka ayaa ku geeriyooday gudaha xabsi ku yaala magaalada Riyaad, halkaas oo […]
Askar Mareykan Ah oo Lagu Dilay Afganistaan.
Wararka naga soo gaaraya wadanka AFganistaan ayaa waxay sheegayaan in askar Mareykan ah lagu dilay weerar ka dhacay wadankaasi. Weerarka oo ahaa Kamiin ama dhabbagal ayaa waxaa cidanka Mareykanka kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay wilaayada lowjar ee dalkaasi afganistaan. Kolanyada Saliibiyiinta […]